Fandefasana Fonosana Boeing 747-8i Air China Package FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 23 229
Mpanoratra: SkySpirit2011, Alrot, Voangona sy nohavaozina FSX nataon'i Chris Evans & Enrique Cornejo
Entana Boeing 747-8I Air Shina amin'ny VC kokoa. Shina fomba ofisialy tonga tany 2014 voalohany hery ara-toekarena izao tontolo izao mialoha ny United States, dia ara-dalàna ny Rikoooo mba hanokana ny entana, nivory sy natontan'i Chris Evans.
Air Shina no hany zotram-piaramanidina ny Sivily-pirenena Aviation Shina, dia mpikambana ao Star Alliance, ny zotram-piaramanidina fifanarahana lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Atambatra sy havaozina ho an'ny FSX miaraka amin'ny B747 VC (zakan'ny 3d virtoaly) avy amin'i Alejandro Rojas Lucenda. Ity no tetikasa Openky FSX modely Boeing 747-8i GenX, ary ao anatin'izany ny serivisy fitaterana entana, tohatra (FSX - Mandehana mijery - Fitaovana tontolon'ny fitaovana -Posky Utility), fanokafana fizarana orona sy maro hafa. Misy motera CF misy feo avy any BrandonG, miaraka amin'ny jono azo tanterahina mba hahalavorary ny sidinao. Natsangana tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny Boeing 747 VC be dia be namboarina avy amin'i Alejandro Rojas Lucena / FSND (Jereo ny antontan-taratasy mifandraisa amin'ny antsipirihany). VC dia ahitana ny FMC, EICAS, MFD miaraka amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso, GPWS, mpanasa lamba, jiro kabinetra, famonoana afo, avionika switch, jiro mifono setroka, fantsom-pifamoivoizana, switch ny jiro, mpanamory milina, mpamokatra APU, mpanamboatra bateria, switchter starter, de- mihodina ny ranomandry, mihodina jiro ankapobeny. Misaotra an'i Project Openky noho ny fanomezana soa aman-tsara nomen'izy ireo ho an'ny vondron'izao tontolo izao amin'ny fanaovana simulation sidina. Nampiditra ny haino aman-jery lehibe Air China nataon'i Stian Svensen aho. Ahitana ihany koa ny fananganana Boeing 747 VC textures. Manome endrika ivelany mazava kokoa an'ny 747 virtoaly anatiny.